सबैलाई समेटेर लैजाने योजना बनाएको छु «
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आगामी हप्ता हुने ४५औं वार्षिक साधारणसभाले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दैछ । नाडाको आगामी कार्यकालका लागि दुई प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । करिब ३२ सय अटो व्यवसायीहरूको साझा संस्था नाडाको साधारणसभाले यसपटक नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।
आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा करण चौधरी र धु्रवबहादुर थापा चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । अटोमोबाइल व्यवसायबाट नै उदाएका चौधरी र थापाबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान पनि गरिएको छ । उनै अध्यक्षका दाबेदार चौधरीसंँग आगामी निर्वाचनका एजेन्डालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :
नाडाको अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तपाईंलाई नै जिताउने आधार के हो र किन जिताउने ?
मेरै नेतृत्व आवश्यक छ भनेर मेरा अग्रजदेखि मेरो टिम र सदस्यहरूको साथ–सहयोग रहेकाले गर्दा नै मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ ।
मेरो विचारमा समूह बनाएर, प्यानल–प्यानल बनाएर जानुको आवश्यकता थिएन । तर, प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएकाले गर्दा समूह बनाएर जानुपरेको अवस्था छ । मेरो समूहमा भन्नुहुन्छ भने वर्तमान र विगतको कार्यसमितिमा रहेर काम गरिसकेका ८० प्रतिशत पुरानै व्यक्तिहरू आगामी निर्वाचनको कार्यसमितिमा समेटेका छौं ।
समयसँगै नयाँ अनुहार र युवा नेतृत्वको आवश्यकता रहने गरेकै छ । नाडाको कार्यसमितिलाई नयाँ ऊर्जावान् नेतृत्वको आवश्यकता भएकाले गर्दा पनि मैले मरो समूह सोहीअनुसार घोषणा गरेको छु । आजको दिनमा सबै तह र तप्कामा युवा नेतृत्वको खोजी भइरहेको समयमा हामीले पनि नाडालाई युवाको नयाँ नेतृत्व दिन खोजेका हौं । सबै पक्षसँगको साथ–सहयोगमा नाडालाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सहमतिको प्रयास जारी राखेका नै छौं ।
कोभिडको नयाँ भेरियन्टको प्रकोप आइरहेका बेला कसरी संयमित र सजग भएर काम गर्नुपर्नेछ, अटोको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी मजबुत बनाएर लाने भनेर पनि काम गर्नु आवश्यक छ । नाडालाई नयाँ उचाइ र युवा नेतृत्व आवश्यक भएकाले गर्दा अहिलेको नाडाको समस्या समाधान गरेर काम गर्न सक्छु भनेर नै मैले नाडामा अध्यक्षको दाबी गरेको हो ।
तपाईंको प्यानलका एजेन्डाहरू के–के छन् ?
मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर एजेन्डा पेस गर्नेभन्दा पनि नाडालाई समयअनुसार र समय सुहाउँदो संस्थाको रूपमा विकास गरेर लाने अठोट लिएको छु । दुई वर्ष कार्यकाल धेरै त हैन, त्यसैले दूरदर्शी भएर केही गर्न सकिने अवस्था छैन । यो समयमा मेरो मुख्य काम भनेकै, प्रादेशिक संरचना बनाएका छौं, त्यसलाई अगाडि बढाउने हो ।
यसका लागि मैले देशभरका ३२ सय सदस्यहरूको माग तथा राय–सुझावलाई सम्बोधन गरेर काम गर्ने हो । साथै विगतका कार्यसमिति र वर्तमान कार्यसमितिले गरेका राम्रो कामलाई निरन्तरता दिँदै समयसापेक्ष र सरकारको नीतिअनुसार व्यवसायीको हकहितका लागि काम गर्ने सोच लिएको छु ।
नाडाको आगामी नेतृत्वले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा कसरी सहजीकरण गर्छ ?
नाडाले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिँदै आएको छ । हामीले सीसीडी रेसियो घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिनेदेखि लिएर कर्जा प्रवाहमा ब्याजदर घटाउन लगायतका काम गर्दै र पहल गर्दै आएका छौं । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक वस्तुको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । अब सवारी साधन विलासिताका वस्तु रहेनन् । यसका लागि सरकारको धारणा र सोच परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा नेपालको अटो क्षेत्रले पूर्णता पाउनछ ।
नाडामा प्यानलै घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको अवस्था छ । एउटै व्यवसाय गर्ने अटोमोबाइल व्यवसायीहरू विभाजनतर्फ लाग्ने देखियो, हैन ?
मेरो विचारमा यो आवश्यक थिएन । हामीले यो संस्थामा प्यानल नै घोषणा गरेर जानु भनेको बाध्यताको विषय हो । सर्वसहमतिका लागि करण चौधरीले २२ गते राति १२ बजेसम्म पनि ढोका खुल्लै राख्नेछ । सबै सहमतिका लागि मेरो प्रयास जारी रहेको छ ।
सरकारले पछिल्लो समयमा एसेम्बलमा ध्यान दिएको छ । आगामी दिनमा नयाँ नाडा कार्यसमिति आएपछि कसरी सहजीकरण गर्दै जान्छ ?
सरकारले स्वदेशमा नै उद्योग स्थापना गर्नका लागि प्रत्साहन गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य हो । नीतिगत र लगानीमैत्री वातावरण विकास हुन सकेको खण्डमा उद्योगको स्थापना हुनु सकारात्मक हो । नीतिगत प्रस्टता भएको अवस्थामा नाडाले पनि एसेम्बल उद्योगलाई स्थापित गर्नका लागि भूमिका खेल्ने नै छ । एसेम्बल उद्योगका लागि नीति बनाउन सरकारसँग पुलको काम गर्नेछ । यसले गर्दा नेपालका एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
नीतिगत पहलमा नाडा चुकेको हो ?
कोभिडका कारण नाडाको मात्र नभएर हरेक तहको प्राथमिकता फेरिएको छ । मानव जीवन नै सबैभन्दा पहिले महŒवपूर्ण रहन्छ । यो कार्यकाल कोभिडका कारणले नै बितेको अवस्था छ र सरकारले नीति–नियम बनाउँदा नाडासँग सहकार्य गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय नाडाको विस्तार देशभर नै भएसँगै यसको गरिमा, उचाइ अझ बढेर गएको छ ।
सरकारको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हो ?
सरकारको सोच परिवर्तन भएको छ । समयअनुसार सोच परिवर्तन हुनु पनि पर्छ । समयअनुसार सवारी साधनमा सबैको पहुँच हुन सकेमा उत्पादकत्व पनि बढेर जानेछ । त्यसैले सवारी भनेको अब विलासिता मात्र नभएर जीवनयापन गर्ने अनिवार्य आवश्यकताको वस्तुमा विकास भएको छ ।
विगतमा नाडामा कर्पोरेट व्यवसायीको मात्र संस्था भयो भनेर जनरल व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका थिए । अहिले फेरि संस्था सदस्यता थप हुँदै गएपछि जनरल व्यवसायीको मात्र बाहुल्य भयो भनिन्छ नि ?
मैले त सबै पक्षलाई समेटेर लानुपर्छ नै भन्दै आएको छु । साना–ठूला व्यवसायी भनेर वर्गीकरण गर्नुभन्दा पनि हामी सबै अटो व्यवसायीहरू हौं । संस्थाको वृद्धि भनेकै संस्थाका सदस्यहरूले गर्दा हुने हो । यस कारणले गर्दा सातै प्रदेशबाट सदस्य समेट्नु भनेको नाडामा सबैको प्रतिनिधित्व हुनु हो ।
मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर एजेन्डा पेस गर्नेभन्दा पनि नाडालाई समयअनुसार र समय सुहाउँदो संस्थाको रूपमा विकास गरेर लाने अठोट लिएको छु । दुई वर्ष कार्यकाल धेरै त हैन, त्यसैले दूरदर्शी भएर केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।
हामीले सीसीडी रेसियो घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिनेदेखि लिएर कर्जा प्रवाहमा ब्याजदर घटाउन लगायतका काम गर्दै र पहल गर्दै आएका छौं । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक वस्तुको रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।
सरकारको सोच परिवर्तन भएको छ । समयअनुसार सोच परिवर्तन हुनु पनि पर्छ । समयअनुसार सवारी साधनमा सबैको पहुँच हुन सकेमा उत्पादकत्व पनि बढेर जानेछ ।